Chetan1 — Tue, 09/17/2019 - 22:17
मावल घर सम्झदा स्मृतीमा रहेका पुराना धमिला चित्रहरु मानपटलमा सल्वलाऊन थाल्छन् । मामाको घर एकान्त जंगलहरुको बिचमा थियो । वरीपरि जंगलै जंगल ,घर मास्तीर एऊटा साँघुरो बाटो । दिऊसै अध्यारो जस्तो महसुश हुन्थ्यो । अझ मामाहरु भन्नुहुन्थ्यो राती राती त त्यो घरमाथिको बाटोमा मुर्कुट्टा हिड्छ रे । कुनैबेला मध्ये रातमा रुदै रुदै नानीहरु हिड्छन् रे ।
मावलमा रात बिताऊनु पर्दा मलाई साह्रै सकस पर्थ्यो,भलै म आमासँगै सुतुं;मुर्कुट्टाको भयले रात खटपटीमै बित्थ्यो ।
Chetan1 — Tue, 09/17/2019 - 22:12
भुतभुताऊदै ऊ बाल्टि बोकेर गाई धुहुन हिड्यो –
” यी बुडा पाकालाई के थाहा डिभी भनेको के हो ? पख न सेकेन्ड लेटर मात्र आओस न । मैले जानेको छ ।”
काठमाडौंको रत्न राज्यलक्ष्मी क्यामपसमा नेपाली बिषय लिएर बि ए पढ्दै थियो ऊ। ऊ एकदमै अल्छे थियो । करैले मात्र पढ्न चाहन्थ्यो । थाहा छैन आई ए कसरी पास गर्यो । नेपाली बिषय सजिलो हुन्छ र पास गर्न सकिन्छ भनेर मात्र ऊसले यो बिषय छानेको थियो । बिए शुरु गरेकै बर्ष ऊसलाई डिभी पर्यो । अब केलाई पढिराख्नु पर्यो भनेर ऊ घर तिर लागेको थियो ।
Sandip Kafle — Sun, 09/08/2019 - 22:52
छोरो बा को छेउमा गएर "बा भाउ बढ्यो भनेको के हो?"
"किन चाहियो यसलाई ?"
"भाउ बढ्यो भनेको पैसा बढ्यो, के भन्छ नि दाम बढ्यो भनेको के मोरा" ग्वाला हाँस्दै भन्यो
"उसो भए बा, दुधको भाउ बढ्यो रे, अब हामी पनि धनी हुन्छौं हैँ ?"
"कसले भन्यो बाबु तिमिलाई यस्तो कुरा ?" ग्वाला झस्कियो
छोरो जान्ने पल्टिदै "त्यो हाम्रो बा को रेडियोले भनेको नि"
ग्वाला रातो अनुहार पार्दै "कहाँबाट बढ्नु दुधको भाउ, त्यो त शहरमा पाइने प्याकेट दुधको भाउ मात्र बढेको हो नि । यो दुध त उहि ४० रुपैयाँ लिटर नै छ नि ।"
बा खोले पकाईरहेका थिए
गाई पराल चपाईरहेको थियो
छोरो फेरि रेडियो बटार्न पुगिगयो
editor — Sun, 09/08/2019 - 17:51
आठ कक्षामा नयाँ विद्यार्थी पसेपछि सबैले मुखामुख गरेर हेरे । नयाँ विद्यार्थी पछिल्लो बेन्चमा गई टुसुक्क बसे ।
कक्षाकै हुल्यहाँ विद्यार्थी रघुले हकार्दै भने–“यो बेन्च हाम्रो हो । अर्को बेन्चमा गएर बस् ।”
नयाँ विद्यार्थी अर्को बेन्चमा गएर बसे । रघुले फेरि भने–“यो पनि मेरो साथीको बेन्च हो, अर्कोमा बस् ।”
adhikarirajesh — Tue, 08/13/2019 - 19:31
रचना – राजेश अधिकारी
कथा – रगतको साँघु
adhikarirajesh — Fri, 08/02/2019 - 18:12